किन बोल्दैनन् शाहरुख खान र अजय देवगन ? के थियो दुश्मनीको रहस्य ? – Khabar Silo
किन बोल्दैनन् शाहरुख खान र अजय देवगन ? के थियो दुश्मनीको रहस्य ?
एजेन्सी । कुनै समय शाहरुख र काजलको रोमान्सका किस्साले बलिउड तात्ने गथ्र्यो । तर, फिल्म र रियल लाइफमा धेरै नै अन्तर थियो । केही यस्तो घटना घट्न पुग्यो जसका कारण अजय र शाहरुख कट्टर दुश्मन बन्न पुगे । बलिउडका दुई स्टार अजय देवगन र शाहरुख खानबीच दुश्मनी रहेको छ ।
यो पुरानो दुश्मनीबारे भने कमैलाई थाहा रहेको छ । शाहरुख खान र काजल कुच कुच होता है फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेका थिए । त्यसै बखत अजय देवगन काजललाई भेट्न सुटिङ सेटमा पुगेका थिए ।तर, काजललाई भेट्न फिल्म युनिटले दिएन । शाहरुख खानले कसैलाई पनि सेटमा जान नदिन भनेको भन्दै अजयलाई फर्काउने प्रयास गरियो । तर, अजयले फिल्म सेटमा नै गइ शाहरुख खानलाई थर्काए ।शाहरुख खान उक्त झमेलाबाट बच्न भ्यानिटी भ्यानमा गएर बसे ।
उता भए भरको रिस काजलमाथि पोख्दै अजय त्यहाँबाट निस्किए ।यो घटनापछि शाहरुख र काजलबीच बोलीचाली नै बन्द भएको खबर पनि बाहिर आएको थियो । तर, लामो समय पछि उनीहरुले माइ नेम इज खान फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू दिलवालेमा पनि देखिएका थिए ।
नायिका सुष्मा कार्की आफ्ना अभिब्यक्तिका कारण चर्चित छन् । उनले खेलेका फिल्म र गरेका आइटम डान्स भन्दा उनले बोलेका कुराले उनलाई चर्चामा ल्याइ रहन्छन् । तर चर्चा सधैं सकारात्मक हुन्छ भन्ने छैन । उनले अरुको आलोचना गर्दा उनको पनि आलोचना हुने गर्छ । पछिल्लो समय यस्तै भएको छ । उनले धुलाई भेटेकी छिन् । यो […]
ग्ल्यामर तस्बिरमा सुष्मा कार्की हेरौ तस्बिर हरु
हट एण्ड ग्याल्यमरस नायिका हुन्– सुष्मा कार्की । उनले नेपाली चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ बाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी हुन् । उनले सुरुमा मोडलिङ्ग करियर रोजेकी थिइन् भने पछि उनले मोडलिङ्ग सफलता पाएपछि चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ डेब्यु गरिन् । उनले चलचित्र ‘बिन्दास’, ‘बाउन्सर’, ‘लूट’, ‘साली कसको भेनाको’ लगायत चलचित्रमा अभिनय गरी सकेकी […]
नयाँ फिल्मबारे साहरुख भन्छन्–‘मैले लेखेपछि मात्र विश्वास गर्नुहोस्’